China Fire retardant akpa ụlọ ọrụ na-emepụta | Weicheng
Akpa nchekwa Db-a3-cd01 bụ ụdị ọkụ ọhụrụ na-akwado nkwado refractory nke ụlọ ọrụ Weicheng mepụtara dịka ọkọlọtọ mba ọhụrụ nke gb23864-2009 (ihe nkwụnye ọkụ). Thedị akpa db-a3-cd01 ọkụ na-ekpuchi ọkụ dị ka obere ohiri isi, a na-eji akwa iko na-eme ka akwa oyi akwa dị na mpụga, a juputara na ngwakọta nke ihe ndị na-enweghị ike ire ọkụ na ihe mgbakwunye pụrụ iche. Ngwaahịa ahụ bụ nke na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị ntụpọ, nke na-enweghị corrosion, na-eguzogide mmiri, na-eguzogide mmanụ, Hygrothermal na-eguzogide ọgwụ, oyi-gbazee okirikiri na njirimara mgbasawanye dị mma. Enwere ike igbasasị ya ma jiri ya mee ihe ọ bụla. Enwere ike ịme ya n'ụdị dị iche iche nke firewall na akwa mkpuchi ọkụ dịka ihe dị iche iche nke ndị ọrụ chọrọ, yana enwere ike iji ya pịnye oghere chọrọ ọgwụgwọ ọkụ ọkụ. Mgbe ị na-ezute ọkụ, ihe ndị dị na ngwugwu ọkụ na-ekpo ọkụ ma gbasaa iji mepụta ụgbụgbọ mmanụ a honeyụ, na-akpụ akwa mkpuchi siri ike iji nweta mgbochi ọkụ na mkpuchi ọkụ, ma na-achịkwa ọkụ n'ụzọ dị irè n'ime mpaghara. Mgbe nkedo nkwụnye rutere 240mm, njedebe nkwụsị ọkụ nwere ike iru karịa 180min.
Aha ngwaahịa Ihe ngwugwu Firestop
Modelkpụrụ nkọwapụta 320 * 180 * 40
Mejupụtara Perlite, vermiculite, iko ákwà,
Ojiji Ojiji A na-eji ya mechie oghere ndị e guzobere mgbe wires, eriri, ọkpọkọ ikuku na ihe ndị ọzọ na-abanye na-agabiga mgbidi nkewa ma ọ bụ ihe mgbochi, nke nwere ike igbochi mgbasa nke ọkụ, karịsịa kwesịrị ekwesị maka akụkụ ndị dị mkpa ebe a na-edochi ụdọ ugboro ugboro.
Uru Uru Mwube dị mfe, enwere ike igbasasị ma jiri ya ugboro ugboro
Nguzogide oku 180min
A na-eji akpa ọkụ na-ekpuchi ọkụ dị ka mgbidi nkewa kama ịkpụ brik, slag cotton, seramiiki ajị anụ na ihe ndị ọzọ n'oge gara aga. E jiri ha tụnyere ha, akpa na-ekpuchi ọkụ nwere mmetụta mkpuchi mkpuchi dị ịrịba ama.
Ihe ngwugwu nke Db-a3-cd01 na-adaba maka ịkwanye ntinye dị iche iche na ike, telekomunikashion, post, ụlọ ọrụ kemịkalụ, Ngwuputa, ụlọ ọrụ, ụlọ na injinia n'okpuru ala, dị ka nkwụnye oghere mebere mgbe ịbanye dị ka eriri, ọkpọkọ mmanụ. , ọkpọkọ ikuku, ọkpọkọ gas, ọkpọkọ ígwè, wdg na-agafe mgbidi nkewa ma ọ bụ akwa nkewa, nke nwere ike ịkwụsị mgbasa nke ire ọkụ, karịsịa kwesịrị ekwesị maka akụkụ ndị dị mkpa nke na-agbanwechi eriri.
Nke gara aga: Fire retardant teepu
Osote: Fire nkwụsị modul